भनिन्छ श्रीमान श्रीमतीको नाता सबैभन्दा उत्तम र पवित्र नाता हो । तर कहिले काँही भने श्रीमान् श्रीमतीबीच एक अर्काप्रति अवि...
धोका के हो ? धोका पाएमा के गर्ने ?
हाम्रो समाजमा धोका दिनु वा धोका पाउनु सामान्य विषय बनिसकेको छ । आजकलका कलिला उमेरका प्रेमीप्रेमीकादेखि वर्षौ सम्बन्धमा ब...
मंगलबारका दिन भुलेर पनि गर्नु हुँदैन यी काम
आज मंगलबार भगवान गणेशको दर्शन आराधना गर्नाले सबै कार्य शिद्धि हुने शास्त्रीय मान्यता छ। करोडौं सुर्यको जस्तो तेज भएका भग...